Umcimbi womaciko eVoortrekker Museum | News24
Umcimbi womaciko eVoortrekker Museum
UMALUSI Arts uhlele umcimbi wamaciko ozobanjelwa eVoortrekker Museum mhla zingama-25 kuNcwaba (August) kugamanxe ihora leshumi nanye (11.30 am).
Lo mcimbi owenzeka njalo ngemuva kwezinyaka ezintathu sekungokwesibili wenzeka kanti kuhloswe ngawo ukunikeza amaciko ahlukene eMgungundlovu, KwaZulu-Natal kanye nasezweni lonke imbala ithuba lokuthi azibonakalise.
Lo mcimbi uhlanganise izinkondlo, umdlalo weshashalazi, umculo, amahlaya kanye nezinkulumo ezakhayo.
Isiqubulo salo mcimbi sithi: “Land Farm Owners”.
Ngokusho kukaMnuz Sibusiso Mahlinza nokunguyena ongumhleli walo mcimbi aphinde abe umsunguli weMalusi Arts uthe ngalesi siqubulo bahlose ukubonisa ukuthi nangaphandle kwe politiki kodwa ubuciko buyalishintsha izwe.
“Mukhulu umehluko owenziwa umculo kulelil’izwe lokho kufakazelwa izingoma ezaziculwa ngesikhathi sobandlululo ezadlala indima enkulu emphakathini nasezingqondweni zabantu ukuze kwagcina kukwaziwe ukuthi abantu baseNingizimu Africa bakwazi ukuhlalisana.
“Nathi sifuna ukusebenzisa ubuciko ukuba sihlanganise abantu bahlale ngokuthula kungabi khona ukukwebhana phakathi kwabo ikakhulukazi abantu abasendimeni yezamaciko,” ubeke kanje.
Uqhube wathi enye into ebenze ukuba baqale lolu hlobo lwemicimbi ingoba babonile ukuthi uMkhandlu woMgungundlovu awunawo umkhiqizo wezamaciko nokwenza ukuthi abantu abathanda bobuciko balangazelele imicimbi efana nalena.
UMnuz Mahlinza uthe useze wathatha isinqumo sokuthi athi khumu kancane ekuhayeni izinkondlo kwazise naye uyimbongi kodwa agxile kakhulu ekusizeni amaciko aseMgungundlovu ukuba aveze ithalente lawo ngokwenza imicimbi efana nalena.
Ukungena kulo mcimbi u-R150 kanti i-VIP yona ingu R200.
Ngeminye imininingwane kungathintwana noMnuz Mahlinza enombolweni ethi: 063 192 1275.